DAAWO SAWIRADA: Ciidamada amaanka oo jaray waddooyin hor leh | TOP NEWS
DAAWO SAWIRADA: Ciidamada amaanka oo jaray waddooyin hor leh
Ciidamada Nabad Suggida ayaa xalay gooyay qaar ka mid ah wadooyinka jidcadyaasha Magaalada Muqdisho, iyadoo arintaan ay tahay mid culeys hor leh ku keenaysa Bulshada ku nool Magaalada Muqdisho.
Wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada Nabad Suggida xalay ay sameeyeen hawlgal lagu gooynaayay dhamaan jidcadyaasha dhexmara xaafadda Buulo Xuubey, waxaana hawlgalka uu ka soo bilowday Isgoyska Danwadaagta, iyadoo lagu geeyay Isgoyska Soobe.
Gaadiidka uma suuragaleyso inay laamiga ka leexdaan, sababtoo ah dhamaan jidcadyaasha xaafadaha dhexmara ayaa lagu jaray dhagxaan iyo caro tuur si uusan gaari u marin.
Sidoo kale ciidamada ayaa gooyay jidcadyaasha mara wadada ka timaada Isgoyska Banaadir ee sida tooska ah u gasha Isgoysak Tarabuunka, gaariga Banaadir ka soo baxa kama leexan karo wadada illaa uu ka tago Isgoyska Tarabuunka.
Qorshahan ayaa looga gol leeyahay sida ay sheegeen Saraakiil ka tirsan Hay’addaha ammaanka in lagu suggo amniga Muqdisho, sidoo kalena gaadiidka aysa ka baxsan Koontaroolada ciidamada la istaajiyay ee gaadiidka lagu baaraayo.
Ciidanka NISA ee Isgoysyada taag taagan ayaa amar lagu siiyay inay baaraan gaadiidka oo ay ka soo dejiyaan dadka saaran si loo hubiyo gaariga iyo waxa saaran.
Inkastoo ciriiri badan uu ka jiro Magaalada Muqdisho oo dadka ay la kulmi doonaan dhibaato badan, ayaa haddana muhiimada waxa ay tahay suggida ammaanka.
DAAWO SAWIRADA: Ciidamada amaanka oo jaray waddooyin hor leh added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 18, 2017